Ma waxaad u jecel yihiin dagaalka iyo ficil kulan? Waa hagaag, hadda android maalin ayaa waxaa uu noqday mid ka mid ah dhufto ee ugu wanaagsan u ciyaaro nooc kasta oo kulan. Suuqa android waa daad, la kulan ku saabsan dhammaan niches oo halkan waa liiska ugu wanaagsan ee 20 kulan oo dagaal android in ay ka qiimo isku dayaya.
Calibur Soul waa mid ka mid ah hogaanka qiimeeyo kulan ganacsi u Android. Ciyaarta ayaa ku siinayaa waayo-aragnimo dagaal 3D badan naqshadeynta spellbinding aad. Waxaad sidoo kale ka ciyaari kara iyada oo line sheeko ama isticmaalaan weerar waqtiga si aad u aragto sida ay u soomi aad tahay.
Tani waa ciyaar layaab leh u robotics caashaqi jiray. Si ka duwan kulamada kale ee ay cartoon, maadda ah ama characters aadanaha waxaa loo isticmaalaa, steel dhab ah, oo ay isku halaynta madadaalo weyn ku siinaysaa fursad ah in ay ku riday aalado si imtixaanka aad. Ciyaarta ayaa u dhaco ee $ 0.99 ee dukaanka google play iyo waddaa on qalabka android. Waxaa jira in ka badan 50 aalado uu ka soo xusho iyo naqshadeynta ma xun tahay oo dhan.
Tani waa kala duwanaansho kale oo bir dhab ah, oo ka tirsan shirkadda la mid ah laakiin ka duwan steel dhabta ah, kulankaan ayaa diyaar u ah free download. Waxaa jira laba nooc oo kulankaan oo waxaad ka heli kartaa isku halaynta qaybihiisa madadaalo weyn.
4. Way of Dogg ah
Way of Dogg waa ciyaar fiican ku geeks iyo kuwii ku jeclaa oo ah waxyaabaha lagu qoslo. Kulankaan ayaa wuxuu isticmaalaa sawiro style maadda ah iyo waxa kale oo uu leeyahay hab oo kala duwan si ay gacanta ku khamaarka. Tusaale ahaan, halkii badhamada caadiga ah in lagu cadaadiyey in ay kiciyaan oo ay dhacdo gaar ah, aad ku sawirnaa doonaa oo mari qaab shaashadda si ay u gaaraan natiijada la rabay.
5. dhiigga iyo ammaanta
Haddii aad tahay galay filimada Tacaddi, aad u jeclaan doonaa ciyaaro dhiig iyo ammaan tan iyo markii ay ciyaarta dagaalka style gladiator qaadan. Ciyaarta waa u bilaash download on dukaanka google play. Waxa uu isticmaalaa xarriiq iyo farsamo dadban labadaba oo ku timaadda naqshadeynta cabsi badan aad.
Sida magacaba ka muuqata, kulankaan wuxuu qaadanayaa style fanka legdinta ee dagaalka. Ciyaarta ayaa si buuxda ugu tiirsan laadadka lama filaan ah iyo gacan qaad sida soo horjeeda combos ee foori awood badan si ay u siin dareenka dhabta ah ee Taekwondo. Ciyaarta ayaa waxaa laga heli karaa labada on Android oo Lugood.
7. Dagaal tiger- Liberal
Dagaal Shabeel - deeqsi ah waa kulan weyn isagana ka jecel rush adrenaline ka. Waxaad ciyaarin ciyaarta oo ay iska soo horjeeda oo la socota ku sii jeeda. Kulankaan ayaa lagu daro gacanta ku screen iyo qaar ka mid ah makaanikada aasaasiga ah.
8. yaabin Contest ee Champions
Yaabin tartanka ee kooxda heysata horyaalka, taas oo labada laga heli karaa android iyo Lugood, waa kulan kale oo maadda iyo Kiinteistö. Kulankaan ayaa waxaa qayb ahaan u waxyoonay ay maadda mini-taxane yaab iyo u ogolaanayaa gamer ah in la dhiso kooxda heysata horyaalka iyada oo heerarka.
9. Hockey dagaalka pro
Kasta oo lover hockey gabi ahaanba waa jeclaan doonaa kulankaan. Waxaad geli karto tartan oo ay galaan ugu sareeya sagaal ciyaaryahan hockey dunida oo dhan. Waxa kale oo aad geli kartaa mid ka mid ah oo ku saabsan mid ka mid ah hab la ciyaaryahan ka fiican si aad u hagaajiso xirfadahaaga. Kulankaan ayaa waxaa laga heli karaa labada on Lugood iyo dukaan google play.
10. Mark yeey
Tani waa ciyaarta dagaalka kama dambaysta ah ee ku caashaqay tallaabada. Mark yeey ayaa gacanta ku dhafan kuwaas oo loogu tala galay in ay bixiyaan sax, wax adag tahay in la gaaro on touchscreen ah. Waxaad ka heli kartaa google play ama Lugood.
11. Gaboodfalkii: Ilaah naga mid ah
Gaboodfalkii: Ilaah naga mid ah waa ururinta dhamaystiran of geesiyaal aad jeceshahay iyo dhigaynaa Dambiilayaasha. Tani waxay ku siinaysaa fursad ah in ay soo qaado aad ugu jeceshahay geesiga / gool kulaad iyo diriro kale geesiyaal / dhigaynaa Dambiilayaasha aad. Waxaad u dhisi kara kooxdaada gaar ah ka dibna geli dagaalka ee 3 a 3 xafiiltanka.
12. King of Xoogaga 98,
Kulankaan waa qaadista ugu fiican ee aanu arintii dugsiga jir. Waxaa la iman naqshadeynta dugsiga jir 2D iyo waxa uu u adeegsanayaa nidaamkii hore Arcade ee credits. Ciyaarta ayaa ku soo beegmay leh 38 characters kala duwan oo aad kala dooran karto.
Haddii aad rabto in aad hesho wax yar hal abuur leh dabeecadaada, markaas feeraan geesiga waa ciyaarta kugu habboon. Waxaad tahay xor-u-habeynta dabeecadda in la eego sida aad rabto tusaale ku daray midabka timaha, timaha wejiga, iwm si dhab ah in aad incoprate kartaa weji oo dhab ah taas oo feature cabsi haddii ay mar walba rabay in aad dalool cadho aad u qabo qof.
Feerka Real ayaa muran la'aan waa ugu fiican kulan dagaal la'aan ah dukaanka google play. Sida magacaba ka muuqata, ciyaarta waxay ku saabsan tahay feerka. Kulankaan ayaa waxa uu leeyahay hab multiplayer in kuu ogolaanayaa inaad la ciyaaro ciyaartoy kale oo online in waqtiga dhabta ah.
15. dagaalama Shadow 2
Tani waa mid ka baxsan ah nooc sanduuqa ciyaarta ee dareenka ah in aanad awood u lahayn characters laakiin shiiska isku halkan ka magaca, hooskii dagaalka. Si kastaba ha ahaatee, shiiska ah macnaheedu ma aha ciyaarta ha noqon doonin mid caajis ah tan garoonka ayaa waxaa ku jira sawiro 2D.
16. ruxi for Dagaal
Kulankaan ayaa lagu tilmaami karaa ciyaarta feerka la ujeeddo ah. Taasi waa sababta oo ah mid kasta oo ka mid ah jilayaasha heli karaa leeyahay sabab gaar ah sababta ay feerka soo horjeeda. Waxaad ka heli uu ka soo xusho 12 characters, 5 goobaha oo dhan ah, kuwaas oo loo soo bandhigay sawiro 3D laga cabsado.
17. TNA Impact Musaaricadu
TNA saameyn legdinta barbaro Waxyooday Xagga kooxda heysata horyaalka dhabta ah TNA legdinta. Waxaad dooran kartaa ka tiro ka mid ah jilayaasha sida Hulk Hogan, Micida, Van Dam iwm Si kastaba ha ahaatee, ciyaarta ayaa sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan kuu gaar ah geesiga TNA khayaalka.
18. waaridda Warriors 2
Tani waa ciyaar in racfaan ka qaadan doonto in ay jeclayd sheekooyinka Tacaddi. In kooban u dhigo, waa sheeko of Jinni disha dalkii laakiin hubka ku dagaalama in ay sii jinnigii gacanka. Haddii aad raadinayso ciyaar xiiso markaas taasi waa doorasho wanaagsan.
19. Dhiig Wild
Iyada oo kaliya meel shuruud ah 2GB, dhiig duurjoogta ah ku siinayaa waayo-aragnimo ah ee laga cabsado naqshadeynta 3 D badan oo dagaallo Tacaddi. Markaan si kooban, ciyaarta waa sheeko ka mid ah Lancelot oo waa ergo in ay waajahaan King Arthur iyo saaxirka xun on.
20. Swat toogte Anti-argagixisada
Haddii aad u jecel sida shuftada iska qaado bartilmaameedyada, markaa taasi waa ciyaar aad u! Hadafka waa mid fudud in meel ka baxsan kuwii iyaga maxaabiis ahaanta u heli haystayaasha. Laakiin ma laydin khiyaanayn magaca ee ciyaarta si qabaa qoriga toogte yahay oo dhan aad have- doonaa waxaad u baahan doontaa in badan oo hub kale si ay u dhameystiraan howlgalka.
> Resource > Emulator > Best 20 Games Dagaal Android